I-Balihoo: Ukuzenzekelayo kwentengiso yaseKhaya | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJuni 29, 2012 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Namhlanje besinayo UShane Vaughan kwinkqubo kanomathotholo exoxa ngokuthengisa okuzenzekelayo kwendawo. UShane yiCMO yaseBalihoo, inkampani ebonelela ngeenkonzo zokuthengisa ezenzekelayo. I-Balihoo liqonga lokuzenzekelayo elisebenza kwiinkampani zeshishini ezineemfuno zokuthengisa kwinqanaba lendawo, njengeefranchise, ukuhanjiswa kweentengiso, okanye iinkampani zenkonzo yendawo. Imizekelo iyafana Yogcino, IGeico, UmatrasiFirm ukubiza ezimbalwa.
Mamela kudliwanondlebe lwethu noShane Vaughan
I-Balihoo ngumboneleli wenkulumbuso wetekhnoloji yeNtengiso yezeNdawo kunye neenkonzo kwiimveliso zesizwe ezineemfuno zokuthengisa zasekhaya. I-Balihoo yenza ukuba ukuthengisa kudidi lweshishini kwinqanaba lendawo kwaye kunike iimveliso zelizwe ukubonakala ngokupheleleyo kuyo yonke imisebenzi yokuthengisa kunye neziphumo.
UShane Vaughan kwiNtengiso yaseKhaya:
I-Balihoo icacisa iimfuno kunye nezibonelelo zentengiso ezenzekelayo:
Fikelela kumathemba kufutshane nendawo yokuthenga Ukuziphatha kokuthenga kwabathengi kutshintshile. Iwebhu yendawo isetyenziswa rhoqo kwaye iintlobo zeendaba ezininzi zibandakanyiwe kwinkqubo yokwenza izigqibo. Ukuzenzekelayo kwasekhaya kwenza iimveliso zesizwe zigcine ulawulo ixesha elide kunxibelelwano kunye nenkqubo yokuthengisa.
Ukuphelisa ukuxhomekeka kumanyano lwasekhaya kunye namaqabane - Thatha ubuchule bakho bokuthengisa kwaye ubenze bube yindawo yakho. Fikelela kwiimarike ezininzi zasekhaya ngomzamo omkhulu njengokuqhuba iphulo elinye kunye nokuqonda kwiimarike zalapha ekhaya kubahlalutyi ke unokuphucula imbuyekezo yephulo lesizwe kutyalo-mali.
Fumana ngexesha, iziphumo ezihlanganisiweyo zeenzame zentengiso yasekhaya - Sebenzisa kwasekhaya kubahlalutyi Ukuchonga intsingiselo yentengiso kunye nokuphucula iinzame zephulo lesizwe.
Ukukhangela kunye nentlalo ukuqhuba urhwebo lwasekhaya ngokubonakalayo kwaye akonelanga ukuba ezi brand zinkulu zibekhona kubukho belizwe. Abathengi kunye namashishini akhangela ngokwengingqi esebenzisa ukukhangela ekujoliswe kuko ngokwendawo. Ngaphandle kwamagama eendawo, iinjini zokukhangela zisebenza ekujoliseni ngokwendawo okuyo umsebenzisi ... Ngamanye amagama, iindlela ezininzi zokukhangela zijolise kwiindlela zokuhlala kwaye ayinakuhoywa.
Balihoo unikezela ngoncedo lwewebhusayithi, ukuthengisa ngokubambisana, intengiso yentengiso kunye nentengiso, kunye nokwakha intengiso kwiphakeji enye enikezela indawo yokuthengisa amashishini amancinci amandla okulawula ngokulula inkcitho yabo yokuthengisa kunye nokuqonda apho kubuyela khona kutyalomali.
tags: Balihooukuthengisa kwendawooomatshini bokuthengisa basekhayaukukhangela kwendawourhweboshane vaughan